Telbee: Makà Hafatra Feo avy Amin'ireo mpihaino Podcast-nao | Martech Zone
Talata, Novambra 23, 2021 Talata, Novambra 23, 2021 Douglas Karr
Nisy podcast vitsivitsy izay naniry mafy aho niresaka tamin'ilay vahiny mialoha mba hahazoana antoka fa mahasarika sy mampiala voly izy ireo. Mitaky asa kely ny manomana, manomana, manoratra, manitsy, mamoaka ary mampiroborobo ny podcast tsirairay. Izany matetika no mahatonga ahy ho any aoriana irery.
Martech Zone no fananako voalohany izay tazomiko, fa Martech Zone InterviewManampy ahy hiasa hatrany amin'ny fahaizako miteny ampahibemaso izy, manampy ahy hifandray amin'ireo mpikatroka sy olona hajaiko ao amin'ny orinasako, ary mamahana ny ampahany amin'ny mpihaino ahy izay mankasitraka ny feo amin'ny lahatsoratra… zavatra tsy tokony hatao ambanin-javatra ny orinasa.
Telbee dia sehatra fandefasana hafatra amin'ny feo izay azonao apetraka hisintonana hafatra amin'ny feo avy amin'ireo vahiny ho avy na mpihaino ny podcasto. Ny sehatra dia manana safidy vitsivitsy vitsivitsy… ny fahafahana manangana pejin'ny toerana haleha azonao zaraina, widget azonao ampidirina amin'ny pejy rehetra, na bokotra miresaka izay azonao ampidirina amin'ny tranokala rehetra amin'ny alàlan'ny script.
Nanangana popup fandefasan-kafatra amin'ny feo aho Martech Zone Resadresaka ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny fampiasana ny sehatra maimaim-poana. Ny dikan-karama dia manana endri-javatra fanamboarana vitsivitsy kokoa, saingy nieritreritra aho fa hitsapa azy io. Raha mamaky ity amin'ny alàlan'ny mailaka na RSS ianao, tsindrio ny lahatsoratra ary azonao atao ny manandrana mametraka hafatra ho ahy.
Andefaso Hafatra Feo Aho
Telbee Scenarios ho an'ny Podcasting
Ireto misy scenario tsara nasehon'i telbee hampiasaina amin'ny podcasting:
Raketo ny votoatin'ny mpihaino ary ataovy mifanerasera ny podcasto - Manasà tantara, fanontaniana ary soso-kevitra ary raketo amin'ny telbee. Vakio ny URL fohy hotsidihina, zarao amin'ny alàlan'ny media sosialy sy mailaka, na ampio mpitam-peo mivantana amin'ny tranokalanao. Miaraka amin'ny fitaovana mora amboarina, mihaino ary mamaly - isaky ny mety!
Henoy - na vakio - ny fandefasana ary tantano ao anaty boaty fidirana manokana - Tsy misy sivana intsony amin'ny mailaka, fahana sosialy, DM ary lahatsoratra avy amin'ny mpihaino anao. Ataovy mora ny fiainana! Raiso ao anaty boaty iray ny rakitsoratrao rehetra, soratana raha tianao. Omeo fidirana amin'ireo mpiara-miasa aminao, mpamokatra ary ny ekipa manontolo hizarana sy hitantana. Miverena mivantana, mariho ny ankafizinao, alaivo ho an'ny fanitsiana, na valio amin'ny feo!
Ampitomboy ny mpihaino anao - Mandraisa anjara amin'ny media sosialy & Amporisiho ny fizarana - Asao ny mpanaraka anao handray anjara amin'ny podcasto amin'ny alàlan'ny sehatra media sosialy rehetra, ary asehoy azy ireo ny habetsahan'ny hafa azon'izy ireo! Henoy ny fotoana WOW rehefa mamaly ianao – Tian'ny olona izany rehefa mamaly ianao, ary tena haingana sy manokana amin'ny alalan'ny feo. Dia tena te hizara ny zavatra ataonao izy ireo ary hanampy amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina misy anao.
Mitahiry fotoana sy fahasorenana amin'ny famoronana votoaty sy fanoratana - Asa mafy daholo ny manomana, mirakitra dinidinika ary mamokatra fizarana. Noho izany soloy amin'ny firesahana ny fanoratana – mora kokoa sy haingana kokoa izany! Ary atsaharo ny fandaharam-potoana. Ampiasao ny telbee hifandraisana amin'ny feo amin'ny ekipanao sy ny mpiara-miasa aminao. Ary raha adinonao io fanontaniana io, mila averina, tsy afaka manao ny diary na te hanamora ny fiainan'ny tsirairay fotsiny, ampiasao ny telbee handrakitra ny vahiny! Miaraka amin'ny fitaovana matihanina amin'ny fampiakarana feo, fifantenana bitrate ary efijery fisarahana mba hizarana fanontaniana.
Telbee dia namolavola Torolàlana ho an'ny Fifandraisana amin'ny Audio Podcast.
Torolalana ho an'ny Fifandraisana amin'ny Podcast Audio Manomboka izao miaraka amin'ny Telbee
Tags: tenyfanangonana feofanehoan-kevitra amin'ny feoaudio formhafatra am-peohafatra am-peoaudio widgettelebeefeofanangonana feofanehoan-kevitra amin'ny feoendrika feohafatra am-peofandefasana hafatrafandraketana feoWidget feo
Hippo Video: Ampitomboy ny tahan'ny valin-kafatra amin'ny fivarotana horonan-tsary